महासमितिपछि कांग्रेसको पहिलो बैठक : केके छ एजेण्डा ? - Sabal Post
महासमितिपछि कांग्रेसको पहिलो बैठक : केके छ एजेण्डा ?
काठमाडौं – प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक भोलि बस्दैछ । महासमिति बैठकपछि पहिलो पटक बस्न लागेको बैठकमा पार्टीको आन्तरिक विषयसँगै राष्ट्रिय राजनीतिबारे पनि छलफल हुनेछ । कांग्रेसले पार्टीका दिवंगत नेताद्धय गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा स्थापना भएको अस्पताललाई खारेज गर्न खोजेको भन्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । सरकारले भने कांग्रेसका अवरोधका बीच चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गर्न चाहेको छ ।
एक पदाधिकारीका अनुसार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्ने सम्भावना बढी छ । उनले भनेका छन्, ‘सरकारलाई चिनिने मात्र होइन, देखिने प्रतिपक्षी चाहिएको जस्तो छ । अब हामी सरकारमाथि त्यही अनसार दबाव बढाउँछौं ।’ केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले महासमितिबाट परिर्माजनसहित पास भएका विधानलाई अन्तिम रुप दिनेछ । केन्द्रीय सदस्य वडा तहबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने र आरक्षण एक तहमा एक पटक मात्र पाउने जिल्ला सभापतिहरुको मागबारे के निर्णय हुन्छ भन्ने धेरैैको चासो छ ।
महासमिति बैठकमा जिल्ला सभापतिहरुले विधान नै रोक्ने चेतावनी दिएपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर, केन्द्रीय समितिमा रहेका बहुसंख्यक नेताहरु जिल्ला सभापतिहरुको दुबै माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा छैनन् । बैठकमा नेपाल विद्यार्थी संघको वर्तमान कार्यसमितिको म्याद थप गर्ने नगर्नेबारे पनि छलफल हुनेछ ।
नैनसिंह महर नेतृत्वको कार्यसमितिले महाधिवेशन गर्न दिएको २ महिनाको म्याद गुज्रिएको छ । वर्तमान कार्यसमिति भंग गरेको अर्को बनाउने कि फेरि म्याद थप्ने अन्यौल कायमै छ । नेताहरुका अनुसार सभापति देउवाले यसबारे प्रष्ट धारणा राखेका छैनन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल अब म्याद नथप्ने पक्षमा छन् भने कृष्ण सिटौला कार्यसमिति भंग नगर्ने पक्षमा छन् । साथै फागुनमा स्ववियु चुनाव घोषणा भएकाले के गर्ने भन्ने अन्यौल देखिएको एक पदाधिकारीले बताए ।
हेर्नुहोस् त : यस्ता गल्ती गरे निजामती…
अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलाे टेलिभिजन ‘द वाल’ सार्वजनिक,…
बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेर फरार युवक पक्राउ
निरोगी रहने यी हन् सात सूत्र
यी मन्त्रहरु जप गरि भगवान शिवको पुजा…